Energetiir Qaadasho ah oo Tixgelinaysa Qalabaynta Qalabka Dabiiciga ah Wax dheeri ah baro
Home > Tamarta kaydinta iyo tayada > Dheecaan derbi adag
Qiyaasta 35-45% ee kuleylka gurigaaga ayaa lagu lumiyaa derbi adag waxayna ku habboontahay in si habboon loo yareeyo biilasha tamarta illaa £ 455 sanad kasta, sida uu sheegay Energy Energy Savings Trust.
Haddii gurigaaga la dhisay ka hor 1935, fursadaha ayaa leh derbi adag oo ka sameysan lebbaad adag ama dhagax.
Sidaa darteed, haddii gurigaagu yahay Villa Victorian ah, aqal waayeel ah, aqal dhagax ah, iwm. Dibedda, qalabka kale ee adag, waa qalab wax ku ool ah oo ku xiran rinjiga derbiga haddii gurigaaga uusan lahayn derbi godad.
Waa maxay rogrogidda qalabka adag?
Haddii aanad heleynin qalabka gudaha ee gudaha gudaha kale waa inaad xakameysaa derbiyada adag ee dibedda ah, oo loo yaqaano rinjiga dibadda ama adag. Tani waa guddi dabaysha cufan, caadi ahaan 90mm qaro weyn, kaas oo kuxiran derbiyada kadibna loo dhiibay si laguugu dhejiyo dhameystirka. Dhamaadka kale ayaa la heli karaa waxaanan xitaa ka dhigi karnaa gurigaaga inuu u egyahay siduu weli ku wareegsan yahay lebbiska.
Sida loo helo rinjiga adag ee adag
Kala hadal - waanu kaa caawin doonaa inaad go'aansato waxa xaqa u ah gurigaaga.
Wac Dammaanadda Tamarta 0800 0 246 234.
2. Booqo booqasho
Soo booqo booqasho mid ka mid ah khabiiradeena si aan kuugu soo gudbino xigasho.
3. Diiwaangelinta shaqada!
Xulo midabka iyo qaabka aad derbiyadaada u sameyso iyo u qor taariikhda shaqada la dhammeeyo.
Kala hadal fursadahaaga
Maxay u dooranaysaa Tamarta Qodobka loogu talagalay qalabkaaga derbiga adag?
Wax lacag ah lagama rabo Baaritaan ku-ool ah oo ku saabsan tamarta tamarta ee gurigaaga
Deeqaha loo heli karo macaamiisha meelo gaar ah - naga soo wac wixii faahfaahin ah.
Ku rakibida, taageerada iyo talada iyada oo loo marayo nidaamka oo dhan.
Nidaamyada si buuxda loo tababaray iyo kuwa la aqoonsan yahay.